सुझाव मालिक: एक कुकुर निशान प्राप्त गर्न कसरी
घर र परिवार, पाल्तु जनावर र
को अपार्टमेन्ट मानिसहरूको बहुमत मा कुकुर, पशु एकदम निशान टिप्न ठूलो मौका समावेश भन्ने तथ्यलाई बावजुद। डरलाग्दो एक निशान जनावरको बाइट्स, र त्यो मालिकको थाहा छैन कि मात्र वास्तवमा छैन कसरी निशान पुल को कुकुर बाट र पछि के गर्न।
कसरी सुरक्षित एक निशान हटाउन। विधि №1
तपाईं आफ्नो पाल्तु जनावर परजीवी फेला भने, त्यसपछि यसलाई तुरुन्तै बाहिर निकाल्न गर्नुपर्छ। यो गर्न, तपाईंलाई आवश्यक वनस्पति तेल, साधारण औंठी, कपास, चिमटी र विंदुक। को कीराहरूको वरिपरि बाल खोल्ने र यो कुकुर शरीर घन्टी मा डाल परजीवी सर्कल भित्र थियो भनेर। सीधा निशान मा त विंदुक ड्रिप तेल। केही मिनेट पछि, कीरा पुल चिमटी एक जोडी प्रयास गर्नुहोस्। घडीको को चिमटी गर्नुहोस् तर शक्ति द्वारा निशान हटाउन छैन। उनको टाउको कुकुर भित्र बाँकी थियो भने, यो खराब नतिजा संग fraught छ। यस मामला मा यो निशान तेल ड्रिप र प्रक्रिया बारम्बार राम्रो अझै पनि छ। रक्सी संग घाउ हटाउन पछि हटाइ।
तपाईंलाई थाहा छैन भने कसरी निशान हटाउन सुरक्षित कुकुर देखि, त्यसपछि यो विधि तपाईं लागि हो। (बाल्न छैन होल्ड सुई नाक संडसी वा अन्य सहायक विषय) को प्लेट मा सुई र यसको चमकिलो लिन र त्यसपछि निशान को शरीर मा सुई घुसाउनुहोस्। आफ्नो कुकुर बाल्न छैन यसरी सावधान रहनुहोस्। को कीराहरूको केही समय को लागि सुई होल्ड, र त्यसपछि अघिल्लो विधि मा रूपमा निशान हटाउन।
यो विधि बताउँछ कुकुर निशान कसरी प्राप्त गर्न पहिलो समान। फेरि, एक ठूलो परजीवी तेल राख्न र केही मिनेट पर्खनुहोस्। कि पछि, यो मुद्दा लाग्न यो बाँध र बिस्तारै उकालो को निशान पुल।
कुनै पनि मामला मा, निशान हटाउने पछि, बनाउन खानको व्यवहार कि परजीवी पूर्ण हटाइएको छ निश्चित र आवश्यक राम्रो, कुकुर यसलाई आफूलाई संक्रमण ल्याए छैन।
को निशान हटाउन समयमा आधारभूत र आवश्यक नियम
कसरी एक कुकुर देखि एक निशान हटाउन केही थाहा छ, तपाईं सावधानीहरु लिन के अझै जान्नु आवश्यक छ।
कीरा बित्तिकै यसलाई पत्ता छ रूपमा बाहिर निकाल्न आवश्यक छ।
तपाईंले पहिले निश्चित हुन पनि निशान हटाउन कुकुर देखि, पन्जा लगाउने। कुनै मामला मा आफ्नो खुला हात संग कीराहरूको स्पर्श छैन।
को निशान हटाउने पछि, यो आवश्यक हत्या हुनुपर्छ। अन्यथा परजीवी कुकुर वा मानव क्षति गर्न सक्छ।
को परजीवी हटाउन समयमा, यो संक्रमित कुनै पनि रोग एक कुकुर जोगिन, squeeze गर्न असम्भव छ।
को सधैं निशान को टाउको रहन्छ कि जाँच हटाउने पछि, त्यसपछि खानको व्यवहार गर्छन्।
सावधानीको र रोकथाम
जनावर एक परजीवी टिप्न थिएन, र त्यहाँ एक कुकुर बाट निशान पुल कसरी कुनै प्रश्न, थिए, तपाईं अग्रिम यसको लागि तयार गर्न आवश्यक छ।
पहिलो प्रारम्भिक वसन्त मा किन्न कुकुर कलर किर्नाले जोगाउँछ। यसबाहेक, तपाईं withers मा ड्रप गर्न सक्छन् एक विशेष उपकरण पत्रु।
दोस्रो, प्रत्येक outing पछि पशु जाँच्न। सबै भन्दा साधारण स्थानहरू त्यहाँ किर्नाले हुन सक्छ - यो कान, घाँटी, टाउको र खुट्टा छ। तर यो कि कण शरीर को अन्य भागहरु मा हुन सक्दैन होइन। सम्झना, यस अब को निशान कुकुर शरीर मा हुनेछ, महान् संक्रमण आफ्नो पाल्तु जनावर कुनै पनि संक्रमण को मौका। तल्लो को परजीवी एक जनावर, को सजिलो हटाउन छ।
तेस्रो, कण फैलाउने को शिखर मा, को जंगल मा हिड्ने जोगिन गर्न अग्लो घाँस, आदि मा प्रयास
को पैसाबारे को निकासी पछि के गर्न
तपाईं आफ्नो क्षमता मा विश्वास छैन र थाहा छैन भने पनि निशान कसरी प्राप्त गर्न को कुकुर देखि, निकटतम पशु चिकित्सा क्लिनिक जानुहोस्। त्यहाँ जनावर आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुनेछ।
तपाईं आफैलाई आफ्नो पाल्तु जनावर लागि परजीवी र अनुभव मेटिएको भने, तपाईं संक्रमण उपस्थिति लागि पशु जाँच गर्न आफ्नो पशुचिकित्सा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै भन्दा राम्रो कीरा हटाउन पछि तुरुन्तै गरेको छ, र डाक्टर लैजान र टिकटिक छ। प्रयोगशाला मा, कीरा जाँच, र यो कुकुर गएर, संक्रमण वाहक हो भने।
हामी जोगिन यदि निशान खानको, छैन चिन्ता छैन र भयातुर हुन सक्छ। भेला र चुपचाप कीरा हटाउन। आवश्यक छ भने, एक पेशेवर सल्लाह लिनुहोस्। मुख्य कुरा - समय मा आवश्यक उपाय लिन, र आफ्नो कुकुर ठीक महसुस हुनेछ।
पैन गर्न खरायो कसरी सिकाउन: प्रभावकारी प्रविधी र उपयोगी सुझावहरू
क्यान्ड "Zoogurman" कुकुर: लाभ, स्थान, समीक्षा
Dogue डे बरद: फोटो, विशेषताहरु र नस्ल स्तर, मालिकको समीक्षा
एक समीक्षा र प्रतिक्रिया: fleas विरुद्ध बिरालोहरु लागि स्प्रे
प्रयोग र ग्राहक समीक्षा लागि निर्देश: बाख खस्छ
घरेलु धुनमा र यसको प्रजाति
बवासीर को ट्याब्लेटको
Volnushek Salting। एक सानो रचनात्मक व्यञ्जनहरु
व्यावसायिक रंग शैंपू र balms
ऊर्जा vampire कसरी चिन्न? ऊर्जा पिशाच प्रतिरोध कसरी गर्ने?
खेलाडीहरूलाई लागि पोषण: प्रोटिन-कार्बोहाइड्रेट मिश्रण gainer। यो के हो र यो गर्ने फिट?
इल्या Oblomov। आई ए Goncharova गरेर उपन्यास मा मुख्य पात्र को छवि
हात प्रक्रिया: चिकित्सा कर्मचारी, नियम, लागूऔषधको हात को प्रक्रिया स्तर
कस्तो ल्यान्डलाइन फोन मोड डायल छ?
Jellied पाइक अड्डा नुस्खा
बाल्यकाल मनपर्ने पेय: टमाटर रस, घर मा खाना पकाउने
त्रुटिहरू कसरी उर्तानु र कसरी रोक्न?
आफ्नै हातमा एउटा किताब कसरी बनाउने। पुस्तक बच्चा कसरी बनाउने